एक्सचेन्ज र रिटर्न नीति
आईटमहरू तिनीहरूका वास्तविक अवस्था र प्याकेजि inमा फिर्ता हुनुपर्दछ, तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको मितिबाट १ days दिन भित्र। हामी तपाईले तिर्ने मूल्यका लागि एक्सचेन्ज वा पूर्ण फिर्ती प्रस्ताव गर्न सक्दछौं।
यो फिर्ती नीति तपाइँको वैधानिक अधिकार लाई असर गर्दैन।
कृपया नोट गर्नुहोस्: यो रिटर्न र एक्सचेन्ज नीति केवल इन्टरनेट खरीदसँग सम्बन्धित छ र स्टोरमा गरिएको खरीदहरूमा लागू हुँदैन।
हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले रमाईलो र ट्र्याकेबल विधि मार्फत आईटमहरू फर्काउनुहुन्छ, जस्तै रोयल मेल रेकर्ड गरिएको वितरण कृपया पोस्टल रसिदको प्रमाण प्राप्त गर्नका लागि याद गर्नुहोस्। कृपया नोट गर्नुहोस् कि हामी कुनै पनि आइटममा जिम्मेवार हुन सक्दैन जुन पोष्टमा हराईन्छ र हामीमा नपुग्दछ। यदि तपाईं रोयल मेल रेकर्ड गरिएको वा विशेष डेलिभरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईले रोयल मेल वेबसाईट ट्र्याक र ट्रेस प्रयोग गरेर तपाईंको पार्सल प्राप्त गर्नुभयो कि भनेर जाँच्न सक्नुहुन्छ।
हामीलाई तपाईंको फिर्ताको अधिक कुशलतापूर्वक प्रक्रिया गर्न सक्षम गर्नको लागि, कृपया पार्सलको साथ कभरिंग नोट पठाउनुहोस्। पियसले वर्णन गर्दछ कि तपाईं एक एक्सचेन्ज वा फिर्ती चाहनुहुन्छ, फिर्ताको कारण, र तपाईंको अर्डर नम्बर र व्यक्तिगत सम्पर्क विवरणहरू समावेश गर्न सम्झनुहोस् ताकि हामी कुनै समस्या भएमा सम्पर्कमा हुन सक्दछौं।
जब हामी फिर्ता रकमको लागि हामीलाई फिर्ता गरेको कुनै उत्पाद प्राप्त गर्दछौं र यसको सर्त र फिर्ताको कारणबाट सन्तुष्ट हुन्छौं, हामी तपाईंको फिर्ताको रकम फिर्ता गर्नेछौं समान भुक्तानीको समान फारम र खाता खरीदको लागि प्रयोग गरिएको वस्तुको लागि भुक्तान गरिएको पूरा रकमको लागि। ।
कृपया नोट गर्नुहोस्: यदि तपाईंले फिर्ताको लागि आदानप्रदान गरिएको वस्तु फिर्ता गर्नुभयो भने हामी हाम्रो थप हुलाक लागतहरू कभर गर्नको लागि fee १० को प्रशासन शुल्क चार्ज गर्ने अधिकार आरक्षित गर्छौं।
+ फिर्ती नीति FAQS
के यो फिर्ताको फारम भर्न आवश्यक छ?
हामी दृढताका साथ सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले फिर्ताको फारम भर्नुहोस्। कृपया नोट गर्नुहोस् कि यदि कुनै वस्तु फिर्ती फारम बिना नै फर्काईएको छ भने हामी तपाईंलाई फोन वा ईमेलद्वारा सम्पर्क गर्न सक्दछौं वापसीको कारण निश्चित गर्नका लागि। यदि हामीले from० दिन भित्र तपाईंबाट प्रतिक्रिया प्राप्त गरेनौं भने हामी तपाईंलाई या त वस्तु फिर्ता गर्ने अधिकार आरक्षित गर्दछौं वा, यदि वस्तु योग्य हुन्छ भने, फिर्ती माइनस £ १० प्रशासनिक शुल्कमा प्रशोधन गर्दछौं।
कुनै वस्तु फिर्ता गर्न मैले कुन सेवा प्रयोग गर्नुपर्दछ?
हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले एक बीमा र ट्रेसेबल विधि मार्फत आईटमहरू फर्काउनुहुन्छ, जस्तै रोयल मेल रेकर्ड वा विशेष डेलिभरी। कृपया पोस्टल रसिदको प्रमाण प्राप्त गर्नका लागि याद गर्नुहोस्। कृपया नोट गर्नुहोस् कि हामी कुनै पनि आइटममा जिम्मेवार हुन सक्दैन जुन पोष्टमा हराईन्छ र हामीमा नपुग्दछ। यदि तपाईं रोयल मेल रेकर्ड गरिएको वा विशेष डेलिभरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईले रोयल मेल वेबसाइटको ट्र्याक र ट्रेस प्रयोग गरेर तपाईंको पार्सल प्राप्त गरेको छ वा छैन जाँच्न सक्नुहुन्छ।
मेरो फिर्ती प्रक्रियामा कति समय लाग्छ?
कृपया सबै रकम फिर्ताको लागि रसीद पछि 10-15 कार्य दिनहरू प्रक्रिया गर्नका लागि अनुमति दिनुहोस्। यदि तपाइँले तपाइँको उत्पादन प्राप्त गरेको १ working कार्य दिन भित्र तपाइँले तपाइँको फिर्ती प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, कृपया हामीलाई বিক্রয় ईमेल ईमेलबाट सम्पर्क गर्नुहोस् ।@smsstore.co.uk।
मेरो खरीद पछि म कसरी आइटम फिर्ता गर्न सक्दछ?
कृपया यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो खरिदको days० दिन भित्रमा तपाईका वस्तु (हरू) फिर्ता गर्नुभयो।
यदि वस्तुहरू यस समय पछि फर्काइयो भने हामी फिर्ता रकम फिर्ता लिन अस्वीकार गर्न हाम्रो अधिकार भित्र छौं तर एक्सचेन्ज गर्न तयार हुन्छौं, वस्तु वस्तुगत अवस्थामा हुन। वस्तुहरू पठाइएको समान अवस्थामा फर्काउनु पर्छ।
के हुन्छ यदि मेरो उत्पादन बिग्रेको छ वा दोष छ?
यस्तो सम्भावित घटनामा कि तपाईंले क्षतिग्रस्त उत्पादन प्राप्त गर्नुभयो वा अर्डर गर्नुभएको छैन भने तपाईं हामीलाई एक एक्सचेन्जको लागि वा पूर्ण फिर्ती फिर्ता यो प्राप्त भएको 30० दिन भित्रमा हामीलाई फर्काउन सक्नुहुन्छ।
के हुन्छ यदि म क्यासब्याक साइट मार्फत खरीद गरीएको वस्तु फर्काउन चाहन्छु?
क्यासब्याक वेबसाइटहरू मार्फत खरीद गरिएका वस्तुहरू समान day० दिन भित्रमा फिर्ता हुन सक्छ, तर क्यासब्याक यी अर्डरहरूमा भुक्तान गरिने छैन।
के हुन्छ यदि म आफ्नो खरीद संग एक नि: शुल्क उपहार प्राप्त?
यदि तपाई नि: शुल्क उपहार लिएर आएको वस्तु फिर्ता गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले सित्तैको उपहार तपाईलाई फिर्ता पठाउनु पर्छ।
+ नीति नीति प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
हामी तपाईको वस्तुलाई खुसीसाथ आदानप्रदान गर्नेछौं जबसम्म यो पुरानो अवस्थामा फिर्ता हुन्छ र माथिको हाम्रो रिटर्न्स नीतिमा उल्लिखित वस्तु फिर्ता गर्ने मापदण्ड पूरा गर्दछ।
एक वस्तु कसरी आदान प्रदान गर्ने
हाम्रो रिटर्न नीतिमा उल्लिखित समान प्रक्रिया अनुसरण गर्नुहोस्। कृपया फिर्ताको फाराम भर्नुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस् कुन आईटमसँग तपाईं यसलाई आदानप्रदान गर्न चाहानुहुन्छ प्रासंगिक सम्पर्क विवरणको साथ, हामीलाई तपाईंसँग सम्पर्क गर्न आवश्यक पर्दछ।
यदि त्यहाँ मूल्यमा भिन्नता छ भने के हुन्छ?
यदि त्यहाँ भुक्तानी गर्न कुनै अतिरिक्त शुल्क छ भने, हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं ताकि भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
यदि त्यहाँ आंशिक फिर्ताको लागि छ भने यो फिर्ता लेनदेन को लागी तपाइँले प्रयोग गरेको कार्डमा जम्मा हुनेछ अर्डर प्रदान us० दिन भित्र हामीलाई फिर्ता गरिन्छ।
त्यहाँ प्रशासन शुल्क छ?
यदि तपाईं कम मूल्यको वस्तुको लागि आदानप्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी प्रतिस्थापन वस्तुको मूल्यमाa10 प्रशासन शुल्क थप्न अधिकार राख्दछौं। यदि यो मामला हो भने हामी तपाईंलाई यसको बारेमा जानकारी दिन सम्पर्क गर्नेछौं।